सल्यानको सुन्दर भुमी कपुरकोटलाई जोगाऔ अभियान'
कपुरकोट बासीदाजु भाईहरु तपाईंहरु त्यहा माहोल बनाउदै गर्नु होला
हामी युवाहरुले काठमाण्डौबाटै हस्ताक्षर सन्कलन गरेर अभियानको बिधिबत उदघाटन गरेर त्यही कपुरकोटमै आउँदै छौ । हाम्रा नेताज्युहरुलाई यतीबेला चुनाव लागेको छ । त्यसैले यस बिषयमा डिस्टर्ब नगर्नु होला । बस आफ्नो भुमीलाई बचाउनका निम्ती तपाईंहरु सबै एक भएर आउनु होला । हामी युवाहरु पनि एक भएर आउँदै छौ । मिलनबिन्दु कपुरकोट । उदेश्य : कपुरकोट जोगाउने र सल्यान गेट बनाउने । अनी समिर्द्द सल्यानको पथमा लम्किन। " सल्यानको सुन्दर भुमी कपुरकोटलाई जोगाऔ अभियान " अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई भद्र रुपमा कपुरकोटको समस्याका बिषयमा सरकारको ध्यानमा पार्नको निम्ती हामीले सुरुवातको चरणमा काठ्मान्डौमै रहने सल्यानीहरुबाट एक्केबद्दता र हस्ताक्षर सन्कलन गर्ने योजना बुनेका छौ । करीब १००० जती हस्ताक्षर काठमाण्डौबाट पुर्याउने लक्ष्य छ । त्यसपछी पुन:सल्यानमा हस्ताक्षर सन्कलन गरिने छ । श्रीनगर, खलङ्गामा २/२ दिन हस्ताक्षर सन्कलन गरिसके पछी हामी युवाहरु टोली गेट बनाउन कपुरकोटतिर आउने छौ । अनी त्यहा पुन: हस्ताक्षर अभियान चलाइने छ - एक हप्ता जती । त्यसपछी कपुर…
भन्नुको आश्य जहाँ राम्रो हुन्छ त्यहाँ नराम्रोको पनि जन्म अटोमेटिक हुदो रहेछ । मान्छेका जीवनका हरेक सुखद पलहरु राम्रोको प्रतिक हो । त्यस्तै हरेक दु:खका पलहरु नराम्रोको प्रतिक हो । राम्रो पछी नराम्रो - यो एउटा प्राकृतिक प्रकृया नै हो - राम्रो जाग्ने बित्तिकै नराम्रो जागीहाल्ने । भगवान जागे अनी यो सृष्टि सम्भव भयो । त्यसपछी राक्षस जागे उनिहरुले भगवानको यो सारा सृष्टिलाई भत्काउन लागे । अनी यो भगवानलाई असह्य भएसी भगवान र राक्षस बिच लडाईं चल्यो । राक्षसले हारे । भगवानले जिते । र यो सृष्टिको अस्तित्व जोगियो । राम्रोको अस्तित्वको निम्ति पनि नराम्रोको उदय हुन जरुरी पनी त छ । नत्र भगवानको अस्तीत्व कसरी प्रष्टिन्थ्यो र ?? भगवानले नै राक्षससँग लडेर आफ्नो र आफुले गरेको सृष्टिलाई जोगाएका हुन । यदी राक्षसनै नभएको भए भगवानले कसैसँग लड्नु पर्ने थिएन नि ?? हो भगवानले हाम्रो सृष्टि बनाए । उनी हाम्रा आमा ब…
२१ बर्षे रन्जु दर्शना काठमाण्डौ महानगरपालीकाको मेयर पदमा उम्मेद्वार दिए जस्तै २३ बर्षे मैले पनि सल्यानको शारदा नपाको मेयर पदमा उम्मेद्वार दिन नसक्ने पनि त होइन । चाहे भने दिन सक्छु । ठुलो कुरो गर्‍यो भन्ने नमान्नु होला । मैले ६८ पेजको सुन्दर शारदा नपा घोषणापत्र - २०७४ ( शारदा नगरपालीकालाई सुन्दर,सम्रिद्द र स्मार्ट नगरपालीका बनाउन सक्ने योजनाहरु / खाकाहरु समाबेश गरीएका छन । ) तयार पारीसकेको छु । यसैको जगमा मेरो उम्मेद्वारी जायज हुन जान्छ पनि । मैले समग्र सल्यानलाईसँगै समग्र शारदा नपालाई पुर्ण रुपमा अध्ययन गरेर स्थानिय स्तरमै गर्न सकिने सयौ सपनाहरु योजनाहरु / अभियानहरु समाबेश गरेर निम्न घोषणा पत्रहरु तयार पारीसकेको छु । सल्यान बिकासनिती ( २१२ पेजको ) सम्रिद्द सल्यान घोषणा पत्र-२०७४ (स्थानिय स्तरमै गर्न सकिने झन्डै २०० वटा अभियानहरु समाबेश गरिएको छ ।) र सल्यान पर्यटन बर्ष-२०७५ घोषणा पत्र (४८ पेजको ) । यसर्थमा यो पाली त सम्भब छैन । तर आउदो पालीको स्थानिय निकायको चुनावमा सल्यान शारदा नगरपालीका मेयर पदमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गर्दछु । माहोल बनेको छ स्थानिय स्तरमा । अब माथि…
Dhurva Raj Oli15 April at 23:48 · सर्ट कन्भरसेसन एक जना पात्रसँगको ।
उहा : बोलेर मात्रै हुँन्न !
म : नबोलेर पनि त हुन्न !!
उहा : गरेर देखाउनु सक्नु पर्‍यो !... See more LikeShow More Reactions CommentShare